လေယာဉ်ကြီး နဲ့ ကိုယ် | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
မမချိုသင်း လေယာဉ်ကြီးက စလိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေး တယ်မိုက်တာပဲ။ ခုထိဇိမ်ကျလိုက်တာ။ နိနိလည်း ဓါတ်လိုက်တတ်တယ်လို့ ညာပြောမယ် ဒါမှ တံခါးလေးတွေ ဖွင့်ပေးမှာလေ။ လေယာဉ်ကြီးမြင်ရင်တော့ အိမ်ပြန်ချင်တယ်။
အမရေ.. မြတ်နိုးလည်း ဒိရောက်တော့ တခါတလေ ဓာတ်လိုက်သလိုဖြစ်တယ်။ ..ကွန်ပျူတာ စားပွဲတွေ နေရာတွေ ကုလားထိုင် အပေါ်ကတန်းကလေးတွေ မှာ အဖြစ်များတယ်။ ဘာဖြစ်မှန်းမသိခဲ့ဘူး။
အမနဲ့လေယာဉ်လိုက်စီးလိုက်တယ်။ ပီးတော့ အမလို ဗိုက်ပါစည်းလိုက်တယ်။ အဟီး
တချို့ တွေကအဲဒီလိုပဲ..ကိုယ်ထဲမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်များနေတတ်တယ်...သတိထားပေါ့..ဟို
ဓတ်လိုက်တာ က ဇိမ်ပဲနော်။ ဓတ်လိုက်တာက အမသူ့ကို ပြန်လိုက်ရင် သူမလိုက်ဘူး။ နောက်တခါ ကိုယ်က အရင် ဦးအောင် လိုက်။ မှတ်ပြီလားဆိုပြီး အော်ပြီးမေး ဒါဆိုရပြီ
အဲလိုမျိုးဓါတ်လိုက်တဲ့သူတွေရှိသလား။ ဒီထဲမှာတင် မမသင်းရယ်၊ မမမြတ်နိုးရယ် နှစ်ယောက်တောင်ပဲ။ သတိလည်းထားကြပါဦးဗျာ။ ထူးဆန်းပါပေ့။
ကျမ တို့ဆီမှာလည်း လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့..အဲလို တဦးတယောက် ထဲမဟုတ်- အားလုံးလိုလိုပဲ.. များများ ဖြစ်တာ နဲ့နဲနဲ ဖြစ်တာပဲ ကွာတယ်။ ဒီမှာတော့..မြေတွေက.. mineralization များလို့ ဓါတ်ကူးပစ္စည်းတွေ ပါနေလို့ -လို့ယူဆရတာပဲ။ နေအုံး- မချိုသင်း ဗိုက်ခွဲ တုန်း..အထဲမှာ- တခု ခု များ ကျန်ခဲ့လားမသိ။း)
အမရေ ဒီနေ့ပဲလာပြန်အော်မလို့ဟာ .. အော်တောင် မအော်လိုက်ရဘူး ခေါင်းစဉ်အသစ်ကလေး တွေ့လိုက်ရတယ်။ ပျော်လိုက်တာ။ အမကတော့ ရေလည်မိုက်ပဲ။ တူးလည်း လေယာဉ်ပျံကြီးစီးပြီး ခရီးအဝေးကြီးသွားချင်လိုက်တာ။ ခုတော့ ထိုင်ရုံရှိသေး ရွှတ်ဆိုရောက်သွားတဲ့ နေရာတွေပဲ သွားဖူးသေးတယ်။
ဟာသ ဝတ်ထု ရေးနေ တာလားဟင် ။ရယ် လိုက်ရတာ။ အဆက် မပြတ်။ မြင်ယောင် ကြည်.့ပါရဲ့ ခွိ ခွိ။
အမရေ... ဘာလို့လည်း မသိ.. ကျွန်တော်လည်း သူများနဲ့ သွားထိမိရင် ဓာတ်လိုက်တယ်.. များသောအားဖြင့် အလုပ်ထဲမှာ.. ကျနော်တို့ ၂ ယောက်က ကျောချင်းကပ်ထိုင်တာမို့ သူ့ကို တခုခု သိချင်လို့ မေးမယ်ဆိုပြီး လှမ်းတို့လိုက်ရင် ဓာတ်လိုက်ရော.. တခါတလေဆို လန့်တောင် လန့်တယ်.. အမရဲ့ LA ခရီးစဉ်ကတော့ အတော်လေး ရီရသား.. ဒါပေမယ့်လည်း အမ ဘယ်လောက် စိတ်ပူနေမယ်ဆိုတာ မှန်းလို့ရတယ်.. :) လေယာဉ်ကို ၁၆ နာရီတောင်စီးရတာ အမုန်းပဲနော်.. ကျနော်ဖြင့် ၆ နာရီစီးရတာကိုတောင် တွန့်လိမ်နေတာ.. ညောင်းလို့ အမရေ.. :D
ဗိုက်မှာခါးပါတ်ဆီးထားပြီး လေဆိပ်မှာ ကိုးယိုးကားယားဖြစ်နေပုံကိုမြင်ယောင်နေတယ်..
ဓါတ်လိုက်တာခြင်းများ တူသဗျိုး၊ လေယာဉ်စီးတာကတော့ ကွာတယ် ဒူကဘာတို့ ငယ်စဉ်က ဗန်းမော် ကနေ မြစ်ကြီးနား သွားတဲ့ စစ်ကျန် ဒါကိုတာ လေယာဉ်ကြီးစီးတာ မိုးရွာလို့ မိုးယိုတော့ အမေက ထီးဖွင့်ဆောင်းပေးတော့ လေယာဉ်မယ်က မဖွင့်ဖို့ပြောတော့ စကားများကြတာ တခုတ်တရ ရှိနေသေးတယ်။
တယ်တချိန်လုံး.. ကားတခါးဖွင့်လဲလိုက်.. ဆောင်းတွင်းအကျီချွတ် လိုက်ရင်အကျီကနေ မီးတွေပွင့်နဲ့စုံနေတာပဲ....
အမေရိကားလာကိုလာတိုင်း မမိုးချိုလိုလေယာဉ်ပေါ်မှာ မပျော်နိုင်ဘူးငါဘာလို့ဒီခရီးလာမိတာလဲ..
လေယာဉ်ပျံကြီးပျက်ကျရင် ကောင်းမှာလို့ ပထမဆုံးလာတဲ့
တခါရယ်ကျောင်းပိတ်လို့ခဏ ပြန်လာတုန်းကရယ် ပြန်မလာချင်လို့တွေးမိတယ်...
အစ်မရေ မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်လာတယ်။
စင်္ကာပူမှာ ဆိုရင်တော့ မလွယ်.. သိတယ်မဟုတ်လား .. ဒီမှာက မိုးကြိုးတော်တော်ပစ်တယ်
Suicide Bomber ထင်လို့ ရဲတွေ“ပြာ” သွားတာ ဖတ်ရင်း ရယ်မိတယ်။ တကယ့် ရုပ်ရှင်ထဲက ပြကွက်တွေလိုပဲနော်။
အစ်မရေ အမြဲလာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်...။ အရေးအသားတွေ
ကြိုက်လွန်းလို့ပါ...။ ဖတ်ရင်းရီလိုက်ရတာ...။ ခဏခဏ ပြန်ဖတ်လို့ ရီရတာတောင်မောနေပြီ...။
အမရေ လေယာဉ်စီး အတွေ့အကြုံဖတ်သွားတယ်ဗျာ။
post နဲ့မဆိုင်ပေမယ့်cbox မတွေ့ email မသိလို့ ဒီမှာပဲ ရေးခဲ့တာ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ။ မနက်ဖြန် Oct 19, 2008 Sunday မှာ အဖေ့အတွက် ရက်လည်ဆွမ်းကပ်ပွဲကို
Burma Buddhist Monetary
710 Grandview Ln,
မှာ လုပ်မှာဗျ။ LAမှာနေတာဆိုတော့ အချိန်ရရင် မိသားစု လာစားပါလားဗျာ။ ကျွန်တော် ဖိတ်ပါတယ်။
လာလည်ဖတ်ရှုရယ်မော သွားတယ်။ အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ အားလည်းကျတယ်။ အားပေးနေပါတယ်။
မမိုးရဲ့ ထူးခြားချက်က စာရေးတတ်တာဗျ....။
ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်လေးကို ရေးတတ်တော့ မီးပွင့်တာ....
မမိုး ကုန်တိုက်ထဲကို ခန့် ခန့် ကြီး ၀င်သွားတာ..
အိပ်ရင်လဲ သိုးမွေးစောင်ဆို မီးတွေတဖြောက်ဖြောက်ပွင့်တယ်အစကတော့တော်တော်လန့့် တယ် ဖြစ်ပါများလာတော့လဲယဉ်လာသလိုပဲ
ဘာလို့ လဲတော့မသိဘူး တစ်ခုသတိထားမိတာက
ဆောရီးနော် မဆိုင်တာတွေလျှောက်ရေးတာများသွားလို့ 
မမိုးချိုသင်း ဓါတ်လိုက်တာက တယ်မိုက်တာဘဲ။ တံခါးဖွင့်ပေးမဲ့လူ အသင့်နဲ့ခန့် ခန့်ကြီးဝင်သွားရုံဘဲ
ဘုရင်မတို့အိမ်ရှေ့ စံမင်းသမီးတို့ဘာတို့ လိုဘဲ ..... (မုန့် ကျွေးနော်)
ဓါတ်လိုက်တာက ချည်သားမ၀တ်လို့ ပါ။ အေးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ နွေးအောင် ၀တ်ဖို့နိုင်လွန်တို့ သိုးမွှေးတို့ သာဝတ်မှ နွေးတာ။အဲဒီ အရာတွေက ဓါတ်လိုက်တတ် ပါတယ်။ ကျမဆို ရန်ကုန်မှာတောင် ဖြစ်ဘူးပါတယ်။ အေးတဲ့ နိုင်ငံရောက်လာတော့ လူတိုင်း ဖြစ်တတ် ပါတယ်။
မချိုသင်း အစ်မရဲ့ ခါးပတ်ပြား ပုံပြင်ကို ဖတ်ပြီး ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေလို့။ ပုံရိပ်တော့ လေယာဉ်ပျံ ပထမဆုံး စီးဖူးတော့ ဘာမှ မစားနိုင်ဘူး။ အစားအသောက်ကို အနံ့တောင် မခံချင်လောက်အောင် မူးခဲ့ဖူးတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆွယ်တာဝတ်တဲ့ အချိန်မှာ ဆံပင်တွေ ထောင်နေတော့ ဒီဇိုင်းက မိုက်တာပေါ့။ ဇိမ်လည်းကျသေးနော။
ဟုတ်တယ်ဆရာမရေ... ကျမကတော့ လူချင်းထိရင် ပိုဓာတ်လိုက်တတ်တယ်....ဆောင်းတွင်းမှာ ပိုဆိုးတယ်...
ဟီးဟီး ရီရတာ မျက်ရည်တောင်ထွက်တယ်။ လေယဉ်ကွင်းထဲမှာ လုံခြုံရေးတွေနဲ့အမဖြစ်နေပုံကို မြင်ယောင်ပြီး ရီတာအူတက်နေပြီ။ လေယဉ်ကွင်းကို နာမည်မကြိုက်လို့ တခြားလေယဉ်ကွင်းရွေးတာလဲ ရီရတာဘဲ။ ဓါတ်လိုက်တာတော့ အဖော်ရှိသွားပြီ ။
သဲထိတ်ရင်ဖို ပါလား အစ်မ။
မမမိုးချိုသင်းရေ ရေးလည်းရေးတတ်ပါ့။ ဖတ်ရင်းနဲ့ တောက်လျှောက်ပြုံးရီနေမိတယ်။ ဆံပင်တွေ ထောင်တယ်ဆိုတော့ ဆိုင်သွားဖို့တောင် မလိုတော့ဘူး တခါတည်း စတိုင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် :P
ချိုသင်းရေ… ရုံးမှာကတည်းက ကော်မန့် တင်နေတာ အရမ်းနှေးနေလို့ ခုမှ ပြန်တင်ရတယ်…
ချိုသင်းအဖြစ်လေးတွေက ပြုံးစရာ… ချစ်စရာ… Suicide Bomber အခန်းကို အကြိုက်ဆုံးပဲ… ချိုသင်းလို အဲလို လေယာဉ်ပေါ်မှာ ပျော်စရာလေးတွေ နဲ့အားကျလိုက်တာ… တို့ ကတော့ ခရီးရှည်မပြောနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်တဲ့ခရီးတိုလေးမှာတောင် မစားနိုင် မပြောနိုင်… လေယာဉ်မူးလို့ လေ…
ချိုသင်းပြောပြတုန်းက အဲလိုဓာတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ ဟယ်..ဟုတ်လားလို့ ဆန်းနေခဲ့တာ..နော်။ တော်ပါသေးရဲ့..သူများတွေလည်း အဖော်တွေရှိလို့..။ မဟုတ်ရင် ငါ့သမီးလေးတယောက်တည်း ဓာတ်တွေများစီးဝင်နေသလား.. ဒုက္ခပါပဲလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့တာ။
i am really proud of you for receivingalot of comments every article. It meansalot of ppl enjoying all ur post including me also. Now i haveahabit already, when starting open my net first i doing is going to ur blog and look for new post. when i see new post i so happy otherwise so sad. Keep it up ma gyi.... i hope u can post so many post eveyday. :)
enjoy! take care ur health
အဟိ ခါးပတ်ကြီးနဲ့ ကိစ္စကို ရယ်ချင်ဆုံးပဲး)
ဟုတ်တယ်အမ။ ညီမလည်းအမလိုပဲခဏခဏဓါတ်လိုက်တတ်တယ်။ ဘဝတူတွေလာတွေ့ကြတာပေါ့။